Nahemotra Tao Anatin’ny Antso Famotsorana Azy Ny Fitsarana An’ilay Mpanao Gazety Makedoniana Ho Manao Asam-Pitsikilovana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2016 4:42 GMT
Ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Makedoniana nikarakara hetsi-panoherana teo anoloan'ny Fitsarana Ady Heloka Bevava mba hitaky ny famotsorana avy hatrany an'ilay mpanao gazety Zoran Bozinovski. Sary: Meta.mk, nahazoana alàlana.
Nahemotry ny Fitsarana Ady Heloka Bevava ao Makedonia ny fotoam-pitsarana voalohany an'ilay mpanao gazety Zoran Božinovski rehefa nanao hetsi-panoherana ho famotsorana azy manoloana ny fitsarana ora maromaro talohan'izany ireo mitovy asa aminy avy ao amin'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Makedoniana.
Voampanga ho manao tsikombakomba ratsy, manao fitsikilovana ary manao fandrahonana i Božinovski. Iray amin'ireo 18 voampanga amin'ny raharaha antsoina hoe “Mpitsikilo” izy, raharaha miampanga vondron'olona ho manao fitsikilovana ho an'i Gresy sy i Hongria, anisan'izany ireo manampahefana tao amin'ny sampam-pitsikilovana teo aloha sy manamboninahitra polisy, ny talen'ny Birao Miady amin'ny Famotsiam-Bola teo aloha, sy ny talen'ny kabinetran'ny filohan'ny Antenimiera teo aloha.Telo taona lasa izay, nosamborina tany Serbia izy rehefa nitady fialokalofana ara-politika, ary naverina ho any Makedonia [mg] tamin'ny Aprily 2016 .
Milaza ny mpanohana an'i Božinovski fa valifaty noho ny asany tao amin'ny vavahadin-tserasera Burevesnik.org, izay namoaka vaovaon-kolikoly mahakasika ireo mpanao politika Makedoniana teo aloha, ny raharaha hiampangana azy.
Nilaza i Naser Selmani, Filohan'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Makedoniana, fa nikarakara ny hetsi-panoherana izy ireo mba hanehoana firaisankina amin'i Božinovski:
Mampahatsiahy ny mpitsara izahay fa eto Eoropa, Makedonia sy firenena iray hafa ihany no manana mpanao gazety any am-ponja. Voalohany, voaheloka i Tomislav Kežarovski ary ankehitriny i Božinovski. Manontany tena izahay ankehitriny hoe iza no ho manaraka. Ao amin'ny firenena izay managadra mpanao gazety, dia eo ambany fandrahonana ny fahalalahana miteny sy ny fahalalahan'ny fampitam-baovao. Natao mba hanasaziana ireo mpanao gazety tsy mankatò sy hampitahorana ary hifehezana ny hafa ny toe-javatra toy izany . “
Nahazo sazy efa-taona sy tapany tany am-ponja i Tomislav Kežarovski tamin'ny 2013 noho ny filazana fa namoaka ny anaran'ny vavolombelona narovana tamin'ny raharaha famonoana olona tamin'ny 2005 izy. Taorian'ny hetsi-panoherana nifanesy sy ny fanohanana avy amin'ny fikambanana mpanao gazety ‘sy ny fikambanana iraisam-pirenena hafa, navoaka i Kežarovski tamin'ny fiandohan'ny 2015. Tany am-ponja izy nandritra ny fito volana ary namita ny sazy sisa tany amin'ny trano voaara-maso.
Toy izany koa, nitaky ny famotsorana an'i Božinovski avy hatrany amin'ny alalan'ny fandoavana onitra mifanaraka amin'izany ny Fikambanana ary nampatsiahy ny zava-nisy vao haingana momba ireo manampahefana teo aloha navela niandry ny fitsarana tany an-tranony fa tsy tany am-ponja. Nanizingizina ihany koa izy ireo fa nanolotra ny raharaha Božinovski ho eo am-pelatànan'ny ny Biraon'ny Fampanoavana Manokana Mahaleotena ny Biraon'ny Fampanoavana tsotra ary nanazava fa midika ho valifaty noho ny famoahany porofom-panararaotam-pahefana ny tsy fanaovana izany.
Sarin'i Zoran Bozinovski tsy mihetsika tao amin'ny antsafa niaraka tamin'ny Nova TV Kroaty.
Navahana tamin'ireo olon-kafa voampanga tamin'ny raharaha ‘Fitsikilovana’ ny fitsarana an'i Božinovski. Voaheloka ireo 17 hafa tamin'ny 2014, ary nahazo sazy iray ka hatramin'ny 15 taona an-tranomaizina, kanefa mbola iadiana hevitra mafy ao amin'ny Fitsarana Ambony ankehitriny ny fanamelohana azy ireo. Taorian'ny nananganana ny Birao Fampanoavana manokana izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana hanafoanana ny krizy ara-politika mitohy ao amin'ny firenena, dia nangataka mba handray an-tànana ny raharaha ny Birao ary nanaiky ny Fitsarana Ambony .
Ora maromaro taorian'ny hetsi-panoheran'ny Fikambanana dia nahemotry ny Fitsarana Ady Heloka Bevava ny fanombohan'ny fotoam-pitsarana, araka ny nolazain'ny Nova TV ao an-toerana. Nanazava tao amin'ny fantsona ny mpitsara Aleksandra Krstic fa na dia nangataka ny porofo rehetra mikasika ny raharaha tany amin'ny Fitsarana Ambony aza izy dia mbola tsisy valiny izany.
Ny raharaha ‘Fitsikilovana’
Nanomboka tamin'ny 2012 ny raharaha, rehefa nampangain'ny manampahefana ny vondron'olona iray, anisan'izany ny mpitsikera ny governemanta sy ireo mpamoaka tsiambaratelo miafina, ho manao fitsikilovana ho tombontsoan'i Gresy sy i Hongria . Samy mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ireo firenena roa ireo, i Makedonia kosa tsy ao anatiny kanefa efa nirotsaka ho kandidà ho mpikambana nanomboka tamin'ny 2005, ary tsy lasa lavitra ny resaka noho ny fanoherana avy amin'i Gresy noho ny fifandirana izay efa nisy hatry ny ela momba ny anaran'i Makedonia sy ny tsy fisian'ny fivoarana eo amin'ny fanafoanana ny kolikoly sy ny hosoka amin'ny fifidianana ao Makedonia.
Tsy namoaka taratasy ara-diplomatika tamin’ ireo firenena manameloka azy ireo ho mpitsikilo i Makedonia, na izany aza. Raha ny marina, telo volana tatỳ aoriana, nidera ny Filoha Hongroà Viktor Orbán ho ” namana lehibe sy mpanohana” an'i Makedonia ny Filoha Makedoniana Gjorge Ivanov .
Tamin'ny Oktobra 2014, nanameloka ireo voampanga 17 ny rafi-pitsarana. Na izany aza, lasa nifindra monina tany Serbia i Božinovski noho ny tahotra ny ainy talohan'izay. Nisambotra azy ny manampahefana Serba tamin'ny 2013 tamin'ny alàlan'ny didy fampisamborana iraisampirenena, ary nentina niverina tany Makedonia izy rehefa afaka herintaona tany am-ponja .
Nanameloka ny fanilihana azy ho any amin'ny firenena ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpiaro ny zon'ny fahalalahana miteny, ary nampitandrina fa mety iharan'ny fampijaliana indray i Božinovski rehefa miverina ao Makedonia.
Namoaka tatitra ny komitin'ny Vaomiera Eoropeanina manohitra ny fampijaliana tamin'ny Martsa 2016 fa manahy mafy izy ireo amin'ny rafi-pamaizana ao Makedonia noho ny “filazalazana fampijaliana ataon'ny mpiasan'ny fonja maro amin'ireo gadra.”
Namoaka tsiambaratelo tamin'ny alàlan'ny fandraisam-peo miafina tamin'ny taona 2015 ny mpanohitra ara-politika ao Makedonia izay ahenoana ny resaka teo amin'i Martin Protuger, ilay tanana ankavanan'ny Praiminisitra Makedoniana Nikola Gruevski tamin'ny fotoan'androny, sy ny Minisitry ny Atitany Gordana Jankuloska tamin'ny fotoan'androny amin'ny fomba hampijaliana an'i Božinovski indray rehefa azo eo am-pelatanany izy. Nangataka ny hitsidika azy i Protuger “miaraka amin'ny fakan-tsary fanarahamaso-fitsikilovana tsy mandeha tamin'izany fotoana izany.” Efa noresahan-dry zareo ihany koa ny fandaminana ny fanolanan'ireo voafonja hafa azy ho toy ny zavatra “mandeha tsy mila resahana.”
Nahazo ny avara-pianarana ao Makedonia hiresaka ireo karazan-javatra maro tsy mety ny fandraisam-peo miafina ary niteraka krizy ara-politika tao amin'ny firenena. Nisy fifanarahana nifanaovana tamin'ny Vondrona Eoropeana sy i Etazonia niezahana ivoahana amin'ny krizy ka tafiditra amin'izany ny fananganana Fitsarana Manokana (Biraon'ny Fampanoavana Manokana araka izay efa voasoratra etsy ambony) hanadihady manokana ny famoahana tsiambaratelo voarakitra ao amin'ilay resaka tafaporitsaka. Na izany aza, nanambara ny Filoha Ivanov tamin'ny 12 Aprily 2016, fa nisy ny fanomezana famindram-po ho an'ireo mpitarika mpanao politika maherin'ny 50 sy ny mpiara-miasa aminy izay nohadihadiana.